PN IT Center မှဆရာပြည့်စုံဝင်းရဲ့ Free Sharing ပြုလုပ်ပေးထားသော Facebook Marketing ဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Myanmar BOCတွင်သင်ခန်းစာများကို Enrollပြုလုပ်၍ စတင်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Customer Service သင်ခန်းစာကို MESI Online Universityမှ သင်ကြားထားတာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာများကို အခုပဲ Myanmar BOCမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာသင်ခန်းစာကို MESI Online Universityမှာ သင်ကြားထားသောသင်ခန်းစာများကို အ်ခုပဲ Myanmar BOCမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
Business Management သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Register/Login ပြုလုပ်၍ Enrollပြုလုပ်ကာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
LCCI online training course ကို Myanmar လိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ အခုခေတ် စီပွားရေး လုပ်ငန်အောင်မြင်ဖို့ ဆိုလျှင် စာရင်းဇယားကို System ကျကျ ရေဆွဲဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီရေဆွဲထားတဲ စာရင်းကလည်းအသုံးတည့်ဖိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုလည်းစီပွားရေးလုပ်ငန်တွေမှာ စာရင်းဇယာ ရေဆွဲတတ်တဲဝန်ထမ်းအမြောက်အများလိုအပ်လာပါတယ်။ LCCI မှာ စာရင်းဇယာကို အြခေခံမှစပြီ Level 1, level 2… စသည်ဖြင့် level လိုက်သင်ယူရပါတယ်။ LCCI online training course ကို Myanmar လို Video training များဖြင့် အောက်တွင်လေ့လာလိုရပါတယ်။ Read More About LCCI Microsoft Excel ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် MyanmarBOC တွင်အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ LCCI Diplomas…
Duwun Media မှ video များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ Welcome to Myanmar BOC best free online courses in Myanmar. You can also learn Different Kind of Languages, Programming Languages, Networking and other various kind of Knowledge in Myanmar Language.
ဆရာမာသင် ရဲ့ video files ကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
စီးပွားရေးအကြောင်း၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အသိပညာများ video files ကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
ဆရာ Ko LATT ရဲ့ video files ကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်
အောင်မြင်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက် video file များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်